Njehie nke kaadị Investors. Error 2 - Blockchain News
Njehie nke kaadị Investors. Error 2
Ha na-eche na ọ bụ omume na-esi bara ọgaranya ngwa ngwa na cryptocurrencies
Cryptotrader Peter McCormack nyochara ọnọdụ na kaadị ahịa, wee kwuo na ọtụtụ ndị ọhụrụ kaadị enthusiasts-abịa n'ahịa nnọọ kpọmkwem na ha ga-enwe ike ngwa ngwa-esi bara ọgaranya. Dị ka McCormack, a na-eduga ọ bụghị nanị na mmechuihu, kamakwa a ngwa ngwa ọnwụ nke ego.
ndammana, mgbe ndị ahịa na-enwe a na-ahụ-anya oge, ọtụtụ ọhụrụ investors-abịa ya, na-enwe olileanya inweta ihe dị mfe uru. Ọzọkwa, ha na-ede banyere ya na ihe niile ozi ọma, na ndị na-jikwaa na a ọma akwụ ụgwọ, agwa banyere ịga nke ọma ha akụkọ. Ma na-egosipụta na a mụrụ: ya mere na a ntụpọ-com afụ, na otu bụ na 2008 ụlọ afụ.
Otú ọ dị, kaadị ahịa anaghị arụ ọrụ n'okpuru atụmatụ nke nzi earnings. Nke a bụ a ada ahịa, nke ụfọdụ egwuregwu na-enwe ike ngwa ngwa-esi bara ọgaranya. Ọtụtụ ngwa ngwa furu efu nile ha investments. kaadị ahịa, ka ọ bụla ọzọ ahịa, bụ cyclical, nke pụtara na mgbe a oge nke ibu, ọdịda oge ga bụchaghị abịa. Dị ka o mere na 2013: na n'ozuzu oge nke cryptology, oge a anya dị ka a oge nke obere ibu, mgbe nke e nwere onye na-adịghị mkpa dobe.
Otú ọ dị, n'ezie, na November 2013 na capitalization nke kaadị ahịa na-eto ngwa ngwa megide backdrop nke mbata nke ọhụrụ Player onye nyekwara ke bitcoin – amamihe ọhụrụ ego nke ga-eme n'ọdịnihu. Ya mere, site December 4, 2013 ọnụ ọgụgụ ruru ya mbụ kacha nke $ 15.7 ijeri. Na site na December 19, capitalization dara sharply fọrọ nke nta abụọ – ka $ 6.9 ijeri. Kaadị ahịa were ihe karịrị afọ abụọ na-agbake na iru gara aga highs.
Ọnọdụ a nwere ike ikwugharị, ọ bụ ezie na taa ahịa maka kaadị ego dị iche iche si ihe anyị hụrụ 2013: Player nwere ihe ọmụma na ya, na ilekota na-ngwa ngwa na-emepe emepe na-achọta ọhụrụ ojiji. Otú o sina, nke a bụ a ada ahịa na ike daa mgbe ọ bụla. N'ezie, e nwere ihe atụ nke otú i nwere ike inwe ọgaranya ngwa ngwa na ya, Otú ọ dị, Ohere nke adịkwa niile investments ruru agụghị oké kpara ego azum nwere ọtụtụ ugboro elu.
Njehie nke kaadị Investors. Error 1 Njehie nke kaadị Investors. Error 3
dee: Richard Abermann
Bụ Bitcoin a Project nke US Intelligence ?
The ele ihe anya fr ...
Olee otú na-a blockchain Mmepụta
Ọ bụrụ na ị na-arọ ...
Über ngalaba-nchoputa & nkwupụta ụda ...
Previous Post:Njehie nke Сrypto Investors. Error 1
Next Post:Njehie nke kaadị Investors. Error 3